'शिक्षाले भविष्यको लक्ष्य निर्धारण गर्छ'
काठमाडौं। संसारमा त्यही व्यक्तिले सफलता प्राप्त गरेका छन्, त्यही व्यक्तिले प्रशिद्धि कमाएका छन्, जसले हिम्मत गरेका छन्। जसले डरलाई जितेका छन्। सफलताको सुरुवात सपनाबाट हुन्छ। प्रायः सपना सुरुवात अपत्यारिला हुन्छन्। तर, मेहनत र लगनशीलताको उपज सपना साकार बनाउन सकिन्छन्।
पहिलो त धेरै मानिसको जीवनमा केही सपना नै हुँदैन। उनीहरू बिनालक्ष्य र उद्देश्य जीवन बाँचिरहेका हुन्छन्। धेरै मानिस सपना पूरा गर्न नसकिने डरले सपना नै देख्दैनन्। उनीहरूको साथमा जहिले पनि बहाना तयार हुन्छ। कहिले परिवारको, कहिले साथीभाइको तथा कहिले समयको बाध्यताको बहाना बनाउँछन्। जो असफल यात्राको सुविधा हो।
केहीले सपना देख्छन्। त्यसमध्ये पनि केहीले दक्षतालाई मापदण्ड बनाउँछन्। अनि सपनाको घेरा खुम्च्याउन थाल्छन्। किनभने उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि बाटो अगाडि कठिन हुने वाला छ। हामीले त्यो जोखिम उठाउन सक्दैनौं। यसरी सपनाको घेरा खुम्चिँदै जान्छ। केहीले एक-दुई प्रयासपछि असफलता बेहोर्नुपरे आफ्नो सपना नै पूरा नहुने भन्दै बाटो परिवर्तन गरिदिन्छन्। तर सफलताले निरन्तर सङ्घर्षको माग गर्छ। जति ठुलो सपना, त्यति नै ठुलो मेहनत र त्याग मागेको हुन्छ।
वास्तवमा हामी भाग्यमा बढी निर्भर रहन्छौं। कुनै पनि सफलता प्राप्त गर्नु वा नगर्नुलाई हामी ‘भाग्यको खेल’ भन्छौं। जबकि हाम्रो पूर्खाहरुले भन्दै आएका छन्, ‘भाग्य छ भन्दैमा डोकोमा दूध दुहेर हुँदैन।’ अर्थात् भाग्यमा छ भन्दैमा विना प्रयास वा श्रम त्यो प्राप्त हुँदैन। त्यसैले भाग्यमा निर्भर भएर निष्क्रिय बस्नु आफैमा मूर्खता हो।
सफलता प्राप्त गर्नु भनेको हिमाली चुचुरो उक्लिनु जस्तै हो। त्यहाँ चुनौती अवश्य हुन्छ। तर, साथसाथै सफलताले पनि पर्खिरहेका हुन्छ। चुचुरो हाम्रो लक्ष्य हो। त्यहाँसम्म पुग्नका लागि हामीले सार्थक यात्रा तय गर्नुपर्छ। हिम्मत गर्नुपर्छ। निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। दृढ विश्वास राख्नुपर्छ। र, चुचुरोमा पुग्ने उमंग राख्नुपर्छ।
सफल जीवनका लागि प्लेटोका वाणीः-
१. मानिस सफल हुन इच्छा, भावना र ज्ञान आवश्यक हुन्छ। यी तीन चिजलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने मान्छे जीवनमा सफल हुन्छ।
२. काम गर्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेकै सुरुवात हो। त्यसैले तपाईँले सोचेको कामलाई कार्यान्वयनमा लान थालिहाल्नुस्। जसले जीवन सफल बनाउन भूमिका खेल्छ।
३. पहिलो र सबैभन्दा ठुलो जित भनेको आफैँमाथिको विजय हो। तपाईँले भविष्यमा हात पार्ने जितमा यसले ठुलो भूमिका खेल्छ। तर, तपाईं आफैँभित्र पराजयको अनुभूति छ भने त्यस्ता जितले लज्जित बनाउँछ।
४. स्वास्थ्य जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत हुनुस् किनभने स्वास्थ्य जीवनको सबैभन्दा ठुलो बाधा हो।
५. अलिकति सन्तुष्टि पनि तपाईंका लागि निकै ठुलो धन साबित हुन सक्छ।
६ जो राम्रो सेवक होइन, ऊ राम्रो मालिक पनि बन्न सक्दैन।
७. स-साना कामलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्नु ठूल्ठूला कामलाई अपूर्ण गर्नुभन्दा धेरै गुणा राम्रो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
८. शिक्षाअनुसार नै मानिसले आफ्नो भविष्यको लक्ष्य निर्धारण गर्छ।
९. जीवनलाई खेल जसरी जिउनुपर्छ, खेल खेल्दाजस्तै रमाइलो गरी। यसो गर्दा मानिस सफल हुनका लागि प्रेरणा मिल्छ।
१०. विश्वासका साथ लडेमा हाम्रो शक्ति दुई गुणाले बढ्छ।
११. महान् बन्न चाहेमा स्वयं आफ्नो कामप्रति प्रेम गर्नुपर्दछ। जुन उचित लाग्छ त्यही काम गर्नुपर्छ, न कि अरूले भनेको काम गर्नुपर्छ।
१२. एक राम्रो निर्णय ज्ञानमा आधारित छ र संख्या छैन।